Warbixin ku saabsan beeraly rajeyna inay noqdaan basle aan awoodin
Radio Ergo 09 May, 2017 MOGADISHU
Maryan Cumar Cali waxay kamid tahay qoysas ay abaarta soo barakicisay oo ku sugan magaalada Muqdishu. Waxay ku hanwayntahay inay ku noqoto deegaanki ay ku noolaal jirtay oo ay ku lahayd beer ay dalagyo kala duwan uga soo bixi jireen. Rajadeedu waxay hagaagi doontaa marka ay hesho caawimaad ah waxyaabaha ay u baahan ee u sahli kara inay tagto deegaankeeda sida qarash. Waxay doonaysaa inay dib u falato beerteeda maadaama uu roob da'ay. Halkan hoose ka dhegeyso warbixin uu ka soo diyaariyey Munasar Maxamed Cabdi.